अण्डरवेयरमा लुकाएर समोसा तस्करी - नागरिक रैबार
अण्डरवेयरमा लुकाएर समोसा तस्करी
तपाईंले अहिलेसम्म तस्करहरुले आफ्ना भित्री बस्त्रभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरेका समाचार सुन्नुभएकै होला । तर के कोही मानिसले अण्डरवेयरभित्र लुकाएर समोसा तस्करी गरेको सुन्नुभएको छ ? सायद छैन होला ।
हालै बेलायतमा एकजना व्यक्ति आफ्नो अण्डरवेयरमा लुकाएर समोसा तस्करी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् ।
बेलायतको बर्मिंघममा यो घटना भएको हो ।
पे रोलमा जेलमुक्त भएका एक व्यक्ति पुनः जेलभित्र जाने क्रममा आफ्नो अण्डरवेयरभित्र समोसा लुकाएर लैजाँदै गरेको अवस्थामा समातिएका हुन् ।
आखिर जेलभित्र जाँदा कट्टुभित्र समोसा लुकाउनुपर्ने कारण के थियो त ? वास्तवमा जेलभित्र राम्रो खाजा खान नपाइने हुनाले आफूले समोसा लुकाएर लगेको उनको दाबी छ ।
अण्डरवेयरमा समोसा लुकाएर जेलभित्र तस्करी गर्दै गरेका ती अभियुक्तको नाम चाहीँ प्रहरीले खुलाएको छैन ।
संसद विघटनविरुद्ध अनेरास्ववियूले निकाल्यो लालटिन जुलुस
गुल्मी प्रशासन कार्यालयमा १५ मिनेटमै सेवा
यो हो संसारकै लामो गाउँ, ९ किलोमिटर लम्बाइ र डेढसय मिटर चौडाइमा १६ सय घर
संसारमा एउटा यस्तो गाउँ छ जो ९ किलोमिटर लामो छ, तर जम्मा डेढ सय मिटरमात्र चौडा छ । हो, युरोपेली मुलुक पोल्याण्डमा रहेको सुलोस्जोवा त्यहीँ विचित्र गाउँ हो । यो गाउँ वास्तवमा संसारकै सबैभन्दा लामो गाउँ पनि हो । सुलोस्जोवा गाउँमा करlब १६ सय घरधुरी छन् । गाउँको बीचौँबीचबाट सडक गएको छ र सप्पै घर […]
बाजुरामा पनि आजबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु